Ifulethi Elinefenisha Ngokuvamile Lentengo Yesabelomali! - I-Airbnb
Ifulethi Elinefenisha Ngokuvamile Lentengo Yesabelomali!
Ifulethi lakho elinefenisha futhi elinethezekile kakhulu, elingaphansi kwemizuzu engu-10 ukusuka enkabeni yedolobha lase-Eindhoven/isiteshi sesitimela nemizuzu engu-5 ukusuka e-Eindhoven. Yilokho okutholayo lapho uhlala nathi, umbungazi wakho osemnkantsh 'ubomvu u-Miriam. Ikhishi lakho lizoba nempahla ephelele, umbhede wakho omkhulu futhi ontofontofo nezinto ezihlukahlukene zehhotela zikanokusho zizonikezwa ukuze wenze uzizwe usekhaya. Futhi ihlelwe eduze nesifunda esincane sokuhweba. Konke ukudla okungenzeka (okungabizi) kuqhele ngemizuzu engu-3. Inani elihle kakhulu lemali!
Ifulethi linezikhala ezintathu: igumbi lokuhlala elivulekile elinekhishi elinakho konke, itafula lokudlela, i-tv nosofa wokulala, ikamelo lokulala elinombhede womuntu onethezekile ongu-2 kanye namakhabethe ahlukahlukene okugcina futhi ekugcineni indlu yokugezela enakho konke ukunethezeka okudingekayo. Uzothola konke lapha ukukwenza uzizwe usekhaya.
Ifulethi litholakala endaweni enokuthula cishe imizuzu engu-10 ukusuka enkabeni, esiteshini sesitimela/sebhasi ngisho nangaphansi. Futhi ihlelwe eduze nesifunda esincane sokuhweba. Konke ukudla okungenzeka (okungabizi) kuqhele ngemizuzu engu-3.
Siphila kude ngemizuzu engu-1 futhi singafinyeleleka kalula ngemibuzo nezimo eziphuthumayo ngenkundla ye-Airbnb, ifoni noma i-app ye-hats. Sihlale sikujabulela ukusiza!